Apple briefly crosseda$3 trillion market cap ﻿
Apple ရဲ့ ဈေးကွက်ရှယ်ယာများ ကန်ဒေါ်လာ ၃ ထရီလီယံအထိ ယာယီမြင့်တက်ခဲ့
Apple ရဲ့ ဈေးကွက်ရှယ်ယာများဟာ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၃ ထရီလီလံကို ခဏတာ ကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ကန်ဒေါ်လာ ၂ ထရီလီယံသို့ ရောက်ရှိကျော်လွန်ပြီး ၁ နှစ်အကြာနှင့် ကန်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံသို့ ရောက်ရှိကျော်လွန်ပြီး ၃ နှစ်အကြာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Apple ရဲ့ အခုလိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုများကို ရရှိနေခြင်းဟာ အများအားဖြင့် iPhone များနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေပြီး ၎င်းတို့ဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ငွေထုတ်စက်များဟုပင် တင်စား၍ခေါ်ဝေါ်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Apple ရဲ့ အခြားသောလုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ Apple services နှင့် Mac ဌာနခွဲများတွင်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ် စတုတ္ထ ၃ လပတ်တွင် အရောင်းရဆုံးစံချိန်အသီးသီးတင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
1:45 PM ET တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၃ ထရီလီယံ ပမာဏကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီး မကြာမှီတွင် Apple ရဲ့ ဈေးကွက်ရှယ်ယာများဟာ အဆိုပါပမာဏအောက်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ရှယ်ယာဈေးကွက်ပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန် 4:00 PM ET တွင် Apple ရဲ့ ဈေးကွက်ရှယ်ယာများဟာ ကန်ဒေါ်လာ ၃ ထရီလီယံအထက်မှာရှိနေတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ရှယ်ယာများကို ပွင့်လင်းစွာရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီများအနက်တွင် အဆိုပါဈေးကွယ်ရှယ်ယာပမာဏရှိနေတဲ့ ကုမ္ပဏီအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
Our Company aspires to achieve the largest broadband access network and integrated content services provider. Promoting physical, mental, and spiritual satisfaction of all employees, while promoting a...
M9 Public Co., Ltd.’s 21st Century Vision is ‘’To be the best distributor for promoting customer living standards by offering high quality and modern products, together with great customer servi...
Fourteen Star Network Co., Ltd.
“To Be The Best Service Leader for Medical Devices” .Fourteen Star Network Company (FSN) has founded in 2004 in Myanmar. FSN distributes medical devices and equipment. FSN has mostly provided ima...
Show the postings (22)